Ciidamada isku horfadhiya Jiidaha Gobolka Sool oo laga soo sheegay diyaar garaw Dagaal | maakhir.com
Ciidamada isku horfadhiya Jiidaha Gobolka Sool oo laga soo sheegay diyaar garaw Dagaal
Laas-caanood:- Hifi fiilo dagaal ayaa laga soo sheegaya Gobolka Sool ee ay isku hor fadhiyaan ciidamada kala taageersan Maamulada Somaliland iyo Puntland,kuwaasi oo dhawor jeer halkaasi fooda isku daray,warkii ugu danbeeuyay ayaa sheegay in ilaa shalay iyo maanta xiisad colaadeed goobahaasi laga dareemayay.Jiidaha Hore ee ay isku horfadhiyaan ciidamada Labadaasi Maamul ayaa waxa ka jira isu hub uruuris baaxadle oo ay labada dhinacaba wadaan kuwaasi oo qoloba qolada kale Kuurka ugu jiraan.
Waxa la soo sheegayaa in ciidamada Maamulka Somaliland ee aagaasi kusugan ay wadaan Abaabul dagaal oo xoogan kaasi oo doonayaan inay dagaal ruga ugu dhigaan ciidamada Puntland ee dhawaan sheegay inay dagaal iyana soo qaadi doonaan.
Afhayeen u hadalay Ciidamada Somaliland ee jooga Gobolka Sool ayaa daaha ka qaaday inay iska difaaci doonaan cid alaale cidii soo fara galisa,isaga oo sheegay inay dhamaan Gobolka Sool ay gacanta ku hayaan waasidoo hadalka u dhegaye.
Afhayeenkaasi waxa uu ka gaabsaday ciidamo dhawaan la sheegay inay ka goosteen Maamulka Somaliland kuwaasi oo u soo ruqaansaday dhanka Puntland arintaas ayuu ku tilaamaamay mid aan sal iyo raatoona lahayn.
Shalay bay ahayd markii ay labada ciidan oo ka kala tisran Maamulka S/land ay food is dareen kuwaasi oo la sheegay inay ahaayeen sahan ayna is garan waayeen waasida ay ku macneeyeene Saraakiisha ciidamadaasi hogaaminaysay waxana halkaasi ku dhintay 4- Askari.
Dhanka Maamulka Puntland oo ayaa isna sheeganaya inay wadaan Abaabul dagaal kaasi oo sheegay inay gacan tooda mar labaad ku soo celinayaan Magaalada Laascaanood ee bisha Maamulka Puntland ka maqnayd.
dhawaan bay ahayd markii Cade Muuse loo qabtay inuu bil gudeheed ku soo cesho Magaalada Laascaanood taasi oo u suuribi wayday, iyaga oo Baarlamaanka Puntland ay wacad ku mareen in kalsoonida la gala noqonayo Cade Muuse hadaanu soo celin magaalada Is taraatiijiga ah ee Laas-caanood.
Waxa jira kulamo xoogan uu oo Cade Muuse la sheegay waxgaradka deeganada Puntland kuwaasi oo uu ka dhaadhiciyay inay mar labaad Puntland qaado Dagaal loogana baahan yahay odaayaal dhaqameedka inay ciidamo ku sii biriyaan Dawlada Puntland in kastoo ay arinkaasi ku gacan saydheen odayaal dhaqameedku.
Magaalada Laas-caanood ayaa waxa Maamulka Puntland laga wareegay 2- bilood ka hor iyaga oo dagaal qadhaadh la galay Maamulka S/land, dibna halkaasi looga riixay ilaa magaalada Laascaanood gacanta ay ku dhigeen Ciidamada Maamulka gooni isu taaga ah ee S/land.
Herdankaas ka dhexeeya Labada Maamul ayaa sababay barakac baahsan oo ay qaxeen Kumanaan Qosy oo deganaa Magalaada Laascaanood ka dib markii rasaasta lala soo dhex galaya Gudaha Magaalada Laascaanood.
Waxa xidhmay Iskuuladii iyo goobihii ganasiga dhamaantood iyada oo dadkii u barakaceen Magaalooyinka ay xasilooni bideen.
« Dawlada F Somalia maxay ka qabtaa Qabsashada Laascaanood?
Maamulka Puntland oo sheegay inay waajib tahay in Budhcada Haysata Wariyaha Aaajinbka la siiyo lacagta ay dalbadeen »